ခြေသည်း၊ လက်သည်းလေးတွေ အမြဲတမ်းလှပနေအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ - Mandalay Directory
ခြေသည်း၊ လက်သည်းလေးတွေ အမြဲတမ်းလှပနေအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ
Saturday, 05 October 2019 15:06
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ Skin care လုပ်ရင် မျက်နှာတစ်ခုတည်း ဂရုစိုက်နေလို့တော့ မရဘူးနော်။ ခြေထောက်လေးတွေပါ သန့်ရှင်းနေဖို့ကလည်း အဓိကကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျိုမေတွေရဲ့ ခြေသည်း၊ လက်သည်းလေးတွေ အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းလှပနေဖို့ ထိန်းသိမ်းနည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ခြေသည်း လက်သည်းလေးတွေ သန့်ရှင်းကြည်လင်နေရအောင် အမြဲတမ်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်ပါတယ်။ အရှည်ထားတဲ့လူတွေကလည်း အမြဲတမ်း အနားလေးတွေ ညှိခြင်းအားဖြင့် ခြေသည်းပိုမိုသန်မာလာအောင် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ မိုးတွင်းမှာဆို ခြေချောင်းလေးတွေကြား သဲဝဲ၊ ရေဝဲများဖြစ်တတ်ပြီး နီရဲကာ အရည်ကြည်ဖုများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မှိုရောဂါနဲ့ ဘတ်တီးရီးယားပိုးများဝင်ကာ မှိုရောဂါစွဲတတ်သောကြောင့် သေချာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Read More>>>ပျိုမေတို့ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ Brush လေးကို ဆေးကြောသန့်စင်တော့မယ်ဆိုရင်
အခုဆို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်လဲ scrub အမျိုးအစားစုံလင်စွာရနိုင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းများစွာလည်း ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ အသားအရေ နူးညံ့ဖို့ဆို scrub ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေမချိုးခင် scrub လေးပွတ်ပြီး ရေချိုးခြင်းအားဖြင့် အညောင်းအညာလည်း ပြေပျောက်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ဖနောင့်သားလို နေရာမျိုးကိုတော့ ချေးတွန်းကျောက်နဲ့ သေချာပွတ်တိုက်ပေးခြင်းဖြင့် အသားမာများ တဖြည်းဖြည်းပါးကာ ကင်းစင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ အစိုဓာတ်ထိန်းခရင် သို့မဟုတ် လိုးရှင်းတစ်မျိုးမျိုးလိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
သတိပြုရမည်မှာ ခြေထောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် scrub ကို နေ့တိုင်းသုံးခြင်းမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အသားအရည်များပါးလာကာ နေလောင်လွယ်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခြေထောက်ဆိုတာ မြေကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေသော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် ပိုမိုထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ကြည့်ကောင်းနေပါစေ ခြေထောက်ညစ်ပတ်နေမယ်ဆို တစ်ဖတ်သားရဲ့အထင်သေးမှုကို ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်လေးလှနေမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြံလေးပေးချင်တာက Wet tissue လေးတွေ ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ တစ်နေကုန် လှုပ်ရှားသွားလာနေချိန် ခြေထောက်တွင် ဖုန်မှုန့်၊ သဲမှုန့်များ ကပ်ပြီး မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်ကာ အသားအရေ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Wet tissue လေးနဲ့ အလွယ်တကူ ပြန်သန့်စင်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဘာမှ ခက်ခဲတဲ့အရာတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် စနစ်တကျ လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကျန်းမာလှပတဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်။
မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ Skin care လုပျရငျ မကျြနှာတဈခုတညျး ဂရုစိုကျနလေို့တော့ မရဘူးနျော။ ခွထေောကျလေးတှပေါ သနျ့ရှငျးနဖေို့ကလညျး အဓိကကပြါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပြိုမတှေရေဲ့ ခွသေညျး၊ လကျသညျးလေးတှေ အမွဲတမျး သနျ့ရှငျးလှပနဖေို့ ထိနျးသိမျးနညျးလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ ခွသေညျး လကျသညျးလေးတှေ သနျ့ရှငျးကွညျလငျနရေအောငျ အမွဲတမျး သနျ့ရှငျးရေးလုပျသငျ့ပါတယျ။ အရှညျထားတဲ့လူတှကေလညျး အမွဲတမျး အနားလေးတှေ ညှိခွငျးအားဖွငျ့ ခွသေညျးပိုမိုသနျမာလာအောငျ ဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ။ မိုးတှငျးမှာဆို ခွခြေောငျးလေးတှကွေား သဲဝဲ၊ ရဝေဲမြားဖွဈတတျပွီး နီရဲကာ အရညျကွညျဖုမြား ဖွဈတတျပါတယျ။ မှိုရောဂါနဲ့ ဘတျတီးရီးယားပိုးမြားဝငျကာ မှိုရောဂါစှဲတတျသောကွောငျ့ သခြောသနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးဖို့လိုအပျပါတယျ။
အခုဆို ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါတှငျလဲ scrub အမြိုးအစားစုံလငျစှာရနိုငျပွီး အရညျအသှေးကောငျးမြားစှာလညျး ထှကျပျေါလာပါပွီ။ အသားအရေ နူးညံ့ဖို့ဆို scrub ကလညျး အရေးကွီးတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရမေခြိုးခငျ scrub လေးပှတျပွီး ရခြေိုးခွငျးအားဖွငျ့ အညောငျးအညာလညျး ပွပြေောကျပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ ဖနောငျ့သားလို နရောမြိုးကိုတော့ ခြေးတှနျးကြောကျနဲ့ သခြောပှတျတိုကျပေးခွငျးဖွငျ့ အသားမာမြား တဖွညျးဖွညျးပါးကာ ကငျးစငျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ အစိုဓာတျထိနျးခရငျ သို့မဟုတျ လိုးရှငျးတဈမြိုးမြိုးလိမျးခွငျးမြား ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။
သတိပွုရမညျမှာ ခွထေောကျပဲဖွဈဖွဈ၊ ခန်ဓာကိုယျပဲဖွဈဖွဈ scrub ကို နတေို့ငျးသုံးခွငျးမြိုး မလုပျသငျ့ပါဘူး။ အသားအရညျမြားပါးလာကာ နလေောငျလှယျခွငျးမြား ဖွဈတတျပါတယျ။ ခွထေောကျဆိုတာ မွကွေီးနဲ့ တိုကျရိုကျထိတှနေ့သေော အစိတျအပိုငျး ဖွဈသောကွောငျ့ ပိုမိုထိနျးသိမျးသငျ့ပါတယျ။ လူတဈယောကျဟာ ဘယျလောကျပဲ ကွညျ့ကောငျးနပေါစေ ခွထေောကျညဈပတျနမေယျဆို တဈဖတျသားရဲ့အထငျသေးမှုကို ခံရမှာဖွဈပါတယျ။ ခွထေောကျလေးလှနမှေ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု ပိုရှိမှာဖွဈပါတယျ။
အကွံလေးပေးခငျြတာက Wet tissue လေးတှေ ဆောငျစခေငျြပါတယျ။ တဈနကေုနျ လှုပျရှားသှားလာနခြေိနျ ခွထေောကျတှငျ ဖုနျမှုနျ့၊ သဲမှုနျ့မြား ကပျပွီး မှဲခွောကျခွောကျဖွဈကာ အသားအရေ ပကျြစီးတတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ Wet tissue လေးနဲ့ အလှယျတကူ ပွနျသနျ့စငျဖို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။ ဘာမှ ခကျခဲတဲ့အရာတှေ မဟုတျတဲ့အတှကျ စနဈတကြ လိုကျနာခွငျးဖွငျ့ ကနျြးမာလှပတဲ့ ခွခြေောငျးလေးတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစနေျော။
Read 396 times Last modified on Saturday, 05 October 2019 15:19
သငျ့အဆုတျကို ပိုးမှားတှမေဝငျနိုငျအောငျ ဘယျလိုနထေိုငျစားသောကျကွမလဲ?
အခုလတ်တလောမှာ Covid 19 ရောဂါကြောင့် လူအများဆိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူတွေက တကယ်ပဲရောဂါကူးစပ်နိုင်ခြေ ပိုများလား?
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ခေါ် Covid 19 ရောဂါကတော့ လူနဲ့ တခြားတိရစ္ဆာန်တွေကို ကူးစက်တတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိချိန်ခါတွင် မြန်မာနို်င်ငံမှာ ၁၀ ရက်အတွင်း Covid 19 ရောဂါကူးစပ်ခံရသူ (၁၄)ယောက်ထိ ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူတစ်ယောက်ရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတော့ သေဆုံးသူ သောင်းကျော်ရှိနေပါတယ်။
လူအများ သတိမထားမိသော လက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်က ပိုးမွှားအန္တရာယ်
မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော အများသုံးပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည့် မီးခလုတ်များ၊ တံခါးလက်ကိုင်များ၊ ဓာတ်လှေကားအတွင်း/ အပြင်ခလုတ်များ၊ ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်များ၊ လှေကားလက်ရန်းများ၊ TV Remote များ၊ ရေခဲသေတ္တာ တံခါးလက်ကိုင်များနှင့် ငွေစက္ကူများ စသည်တို့မှ ကူးစက်ရောဂါ ဗိုင်းရပ်ပိုးမွှားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ကို ကျန်းမာရေးအသိအမြင်ရှိသူတိုင်း သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။